पूर्वप्रेमीको लामो लिङ्गका कारण आफ्नो योनीमा क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा हालिन् – Sawal Nepal ||The Power of Information
पूर्वप्रेमीको लामो लिङ्गका कारण आफ्नो योनीमा क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा हालिन्
एजेन्सी २०७६ श्रावण २८, मंगलवार २१:५५ मा प्रकासित
सुन्दा पनि अच्चम्म लाग्न सक्छ यो खवर । एक महिलाले आफ्ना पूर्वप्रेमीविरुद्ध अनौठो उ*जुरी गरेकी छिन् । जिम्बाबेमा पूर्वप्रेमीको लिंग असाधारण किसिमले लामो हुँदा आफ्नो भेजिना योनीमा क्षति हुन पुगेको उनको दाबी छ ।
सिलिण्डाइल मान्गेना नामकी २९ वर्षीया उक्त महिलाले ३७ वर्षका पूर्वप्रेमी मुगोभ कुरिमाविरुद्ध मु*द्दा हालेकी हुन् । ती महिलाका अनुसार उनी उक्त क्षतिविरु*द्ध शल्यक्रिया गर्न गइरहेकी छिन् । तर उनले यसको खर्च भने पूर्वप्रेमीले नै भर्नुपर्ने दाबी समेत गरेकी छिन् । यसको खर्च ८ हजार पाउन्ड अर्थात् नेपाली करिब १२ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।
सोही खर्च भराउन ती महिलाले पूर्वप्रेमीलाई अदालतसम्म लैजान लागेकी हुन् । यो घटना जिम्बाबेको हो । जिम्बाबे मेलसँग सिलिण्डाइलले गरेको कुराकानीलाई उद्धृत गर्दै मिरर युकेले जनाएअनुसार उनको योे*नीमा पूर्वप्रेमीकै कारण क्षति पुग्नुका साथै बदलाव आएको छ ।
जसले उनलाई निकै असहज बनाएको उनको दाबी छ । यद्यपि पूर्वप्रेमीको लिंगको आकारबारे भने अहिले सम्म खुलिसकेको छैन । यो खबर नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।
दूधका बोतलबाट सडक निर्माण !
प्राध्यापककाे झोलामा मृतक महिलाको हात भेटिएपछि…
व्यापारमा फाइदाको लोभमा श्रीमती साटासाट !
आमाका लागि दुलहा खोजिरहेकी यी युवतीले ट्वीटरमा राखिन् यस्तो तीन शर्त, जुन भयो भाइरल !